U-Larsen ucacisa ngeyezinkontileka
UCLINTON Larsen wePolokwane City uthi kuzocaca ngezinkontileka zabadlali eziphelayo uma sekucacise iPSL ngemidlalo Isithombe: BACKPAGEPIX
LUNGILE MAJOKA | June 30, 2020
UMQEQESHI wePolokwane City, uClinton Larsen, uthe kunzima ukubhunga ngeyokulula izinkontileka zabadlali eziphelayo kule nyanga njengoba lungakaphumi usuku lokubuya kwemidlalo yePremier Soccer League (PSL).
Emaqenjini kunabadlali abaphelelwa yizinkontileka namuhla (Juni 30) kodwa amaqembu asabadinga ukuze kuqedelwe imidlalo esele.
Lokhu kuphithanelwa ngamakhanda kubaqeqeshi, abaphathi nabadlali kudalwe wukumiswa kwemidlalo ngoMashi, ngemuva kokubheduka kweCovid-19 emhlabeni wonke.
ULarsen unethemba lokuthi maduze iPSL izomemezela ukuthi imidlalo iqala nini ukuze baqhubeke nezinhlelo zabo. Uhlalelwe wumsebenzi wokutakula iCity ekudliweni yizembe uma sekubuya imidlalo.
Uhulumeni usevumile ukuthi imidlalo yebhola isingabuyela enkundleni. Sekusele ezikhulwini ukuthi ziphume nezinsuku nezinkundla okuzodlalelwa kuzona.
“Kunomthetho manje ovumayo ukuthi inkontileka ingavuselelwa inyanga ngenyanga kodwa ke futhi akulula ukukhuluma ngezinkontileka okwamanje ekubeni lungakaphumi usuku lokuqala kwemidlalo. Wonke amaqembu asesimeni esifanayo. Uma seluphumile sizobe sesikhuluma nabadlali abathintekayo,” kusho uLarsen.
Uthe wethemba ukuthi lokhu kuzokwenzeka maduze.
NgokukaLarsen beyiCity bekuyima bezoya kohlolwa iCovid-19 kuleli sonto ukuze baqale ukuziqeqesha.
“Engikwaziyo okukusomqulu esiwunikezwe yiPSL, wukuthi kumele nihlole izinsuku ezimbili kuya kweyizikhombisa ngaphambi kokuthi niqale ukuziqeqesha. Ngiyacabanga ukuthi sizohlola ngoMsombuluko (izolo) noma ngoLwesibili (namuhla) ngoba silindele ukuthi kuleli sonto iPSL imemezele ukuthi imidlalo izobuya nini,” kusho uLarsen.
IFifa yakhipha umgomo wokuthi abaphelelwa yizinkontileka abasadingeka, akuxoxwe nabo ukuze zilulwe kuze kuqedelwe imidlalo esele kule sizini. Kodwa yakugcizelela ukuthi akekho ophoqiwe ngalokhu kufanele izinhlangothi zombili (iqembu nomdlali) zivumelane.
Kuvela ukuthi lokhu kungaqondi nqindi nasibhakela ngokubuya kwemidlalo, yikhona okuhlukanise iChippa United nobengumeqeqeshi uRulani Mokwena.
UMokwena wasayina inkontileka yezinyanga eziyisithupha neChippa, ebiphelelwa yisikhathi namuhla. Eminye imibiko ithe abaphathi bakhe bebefuna iChilli Boys iqinisekise ukuthi iyamgcina kule midlalo kodwa iqembu langaphuma nempendulo ngokushesha.
Ibhodi yePSL kuthiwa izoba nomhlangano namuhla lapho izobhunga ngomhlahlandlela wokuqala kwemidlalo.
Kunomnqamulajuqu kaJuni 30 wokuthi bona neSafa bazise inhlangano iFifa, ukuthi izoqala iphinde iphele nini imidlalo esele bese kuqondiswa newindi lokubhalisa abadlali ngesizini ezayo.